Yakagadziridzwa malaptop Kubva kuSamsung, Dell & Zvimwe Izvo Zvakakwana mukusimudzira paBhajeti
Kana chimwe chezvinangwa zvako zve2020 chichiwedzera kubereka, unenge uri kutsvaga kukwidziridzira kuchinhare chepamusoro. Asi, kana chimwe chimwe chezvinangwa zvako chiri chekuchengetedza mari, saka iwe ungangove uri nani kutenga yemhando yakagadzirisirwa, iyo inowanzo kuve yakanaka seyakatsva, asi, sezvo iri pre-ndeyenzvimbo, inouya pakuderedzwa. Heano gumi kubva pamhando yepamusoro senge Samsung, Dell, uye Lenovo yaunogona kuwana izvozvi.
Lenovo N21 11 ″ Chromebook 2.1GHz, 4GB RAM, 16GB Drive (Yavakwazve)
ichi zippy Chromebook inotora chete masekondi matatu kubhowa, nepo bhata-maseru matanhatu achigara kwemaawa masere pachaji izere. Iyo ine zvakare ine 180-degree kamera uye inoratidzira crisp. Iyo N21 inodzosera pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu, asi iwe unogona kuwana model yekuenzanisira izvozvi $ 89.99 chete.
kumhanya Chrome Os pane intel Celeron N3050 processor, iyo N22 inoita kuti ushande kwemaawa gumi nemana uchibhadhara zvakakwana. Unogona kuita vhidhiyo kufona neiyo 14p HD webcam, uye wedzera imwe nzvimbo kuburikidza nemakadhi kadhi slot. Yakanga iri pakutanga $ 720, asi iwe unogona kuwana yakasimbiswa refurb modhi ikozvino nokuti $ 99.99.
Lenovo Tab 4 8 ″ 16GB Tafileti Nhema (Yavakwidziridzwa)
Yakakwana yemitambo, kutumira mameseji uye nezvimwe, izvi 8-inch Lenovo piritsi inopa HD zviratidzo uye Dolby Atmos ruzha. Iyo 64-bit quad-core Snapdragon processor inoita kuti iyi rezale-yakatetepa sosi inyatsokodzera kune akawanda-tasking. Order izvozvi pamadhora makumi masere nemasere kuti utorezve Ref Tab Tab, inodhura madhora mazana matatu nemakumi matatu nemashanu.
Acer 11.6 ″ scsc ″ sc Chrome book Chrome book 1.6 3150 16GHz Intel NXNUMX XNUMXGB (Yavakwazve)
Iine 11.6-inch touchscreen kuratidzwa pane 360-degree hinge, iyo Acer R11 inoshanda sechipiniti uye piritsi. Pasi pehodhi, ine 4GB ye RAM uye quad-core Intel Celeron processor. Order izvozvi pamadhora makumi masere nemasere kuti uwanezve kugadziridzwa, kwakakosha madhora mazana matatu nemakumi matatu nemashanu.
Acer Chromebook 11 ″ C740-C4PE 16GB (Certified Refurbished)
Nemakona akasimbiswa uye akawedzera mbabvu mapaneri, izvi Acer muchina inogara kwenguva refu kupfuura mazhinji laptops. Inopa maawa 9 ehupenyu hwebheti, iine 16GB ye SSD yekuchengetedza uye Intel Celeron processor. Pakutanga $ 199, yakasimbiswa refurbs ikozvino chete $ 99.99.
Imwe sarudzo yekubata kumeso kukuru ndiyo yakanyanya-yakerwa Acer Chromebook. Iyo 11-inch kuratidza ine resolution ye 1366 x 768 pixels, uye iyo 1.6GHz processor inogona kubata multitasking. Kazhinji $ 399, certified refurbs ari parizvino $ 249.
Dell Chromebook 11-3120 2.16GHz Intel Celeron 16GB SSD (Yavakwazve)
ichi Dell simba ine 2.16GHz processor iyo inokwanisa kubata akawanda ma tabo. Iyo 11.6-inch anti-glare kuratidzwa kwakakwana kwekushanda kunze, uye iwe unowana maawa mapfumbamwe ehupenyu hwebheti. Refurbs ikozvino 66% kubva pamutengo uzere pa $ 84.99.
Samsung Chromebook 11.6 ″ 16GB (Yavakwazve)
Yakagadzirwa nevanhu vakafanana vanogadzira mafoni eGreen, iyo Samsung Chromebook ine Exynos 5 Dual-Core 1.7GHz CPU uye yakajeka 1366 x 768 kuratidza. Yakanga iri pakutanga $ 599, asi iwe unogona kutora yekugadzirisa zvakare nokuti $ 99.99.
Dell Chromebook 11 11.6 ″ 16GB (Certified Realtbished)
Yakavakwa kusangana neUS Military Standard, iyo dell Chromebook 11 inotakura iyo 2.1GHz Intel chip mune ine rugged kesi. Ichi chishandiso chine HD anti-glare kuratidzwa uye 16GB yekuchengetedza SSD. Order izvozvi pamadhora makumi masere nemasere kuti uwane wemuenzaniso wekuvandudza dhizaini.
Dell 5190 Touchscreen Chromebook Intel Celeron N3450 32GB (Yakagadzirwazve)
ichi 2018 inobata skrini Chromebook inokwanisa kumira kupemha uye kudonha, ichiita kuti ive yakanakira vana. Izvo zvinoshandawo se 2-in-1 mudziyo, iine 2.4GHz Intel processor uye 32GB yekuchengetedza. Iwe unogona kubata yakagadziridzwa modhi izvozvi chete $ 199.99.
The post Yakagadziridzwa malaptop Kubva kuSamsung, Dell & Zvimwe Izvo Zvakakwana mukusimudzira paBhajeti yakatanga kutanga xda-vatadzi.
The Best Chromebooks ye2018 yakaongororwa uye yakaenzaniswa
Ongorora: Iyo Snapdragon 7c inodzora iyo Acer Chromebook Spin 513
Yakanakisa Chromebook 2021: Iwo epamusoro Chrome OS malaptop kubva kuDell, Acer neGoogle